Turkiga oo ay ka go’antahay in uu maxkamadeeyo ragii dilay Jamal Khaashuqji – Bandhiga
Turkiga oo ay ka go’antahay in uu maxkamadeeyo ragii dilay Jamal Khaashuqji
Maxkamad Turkish ah oo kutaala Istanbul,ayaa soo saartay go’aan lagu soo qabanayo kooxda ku eedaysan dacwada wariyihii sida bahalnimo loogu dilay gudaha qunsuliyadda qoyska Sucuudiga Jamal Khaashuqji 2-dii bishii Oktober ee lasoo dhaafay.
Wargeyska “Sabah” ee kasoo baxa dalka Turkey ayaa sheegay in maxkamadda dembiyada ee Istanbul,ay amar ku bixisay in lasoo xiro 15-kan eedaysane ee fuliyay dilka loo gaystay Khaashuqji.
Waxa go’aankan lagu riday eedaysanayaashan kamid ah in laga soo qabto meel kasta oo ay joogaan si ay su’aalo u waydiiso xeer ilaalinta guud ee Istanbul, oo ku eedeeysay dil u kas ah oo bahalnimo, sida ku xusan qodobada Xeerka Ciqaabta Turkey.
Wargeyska ayaa sido kale faafiyay magacyada 15 eedeeysanayaasha ah oo uu soo diray ninka lagu sheego dhaxal sugaha qoyska Sucuudiga ee maamula dhulka Barakaysan oo isaga ah dambiilaha dhabta ah ee ka dambeeyay dilkan bahalnimo ee laga argagaxay ee ka baxsan bini’aadanimada.
Xukuumadda Turkey ayaa hore u codsatay in loo soo gacan galiyo eedaysanayaashan fuliyay dilkan bahalnimo ee loo gaystay Khaashuqji, laakiin waxa codsigan ka dhago-adaygay ninka dhaxal sugaha ah oo isagu ka cabsi qaba in si toos ah dambigan dusha looga saaro kadib marka kooxdani ka hor qiratao maxmaddan inuu isagu faray.